यस्तो ट्याब्लेट पीसी रूपमा ग्याजेटहरू एकदम लामो समय देखा, तर एक निश्चित बिन्दु तिनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई विशेष चासो छैन। यो कारण एकदम सरल छ: केही वर्ष पहिले, विकासकर्ताहरूले सीमित थिए अवसर, तिनीहरूले पर्याप्त शक्तिशाली र कार्यात्मक उपकरण सिर्जना गर्न सकेन। कुनै एक कुनै एक यसको लागि निर्धारित थियो जो मूल्य, भुक्तानी गर्न चाहन्थे विशेष गरी देखि, केवल केही आधारभूत कार्यहरु सक्छ जो ट्याबलेट, रुचि थियो। कुनै एक के अचम्म लाग्छ ट्याब्लेट चयन गर्न विकल्प केहि थिएन किनभने।
वर्ष को बस एक जोडी पहिले, स्थिति बिस्तारै परिवर्तन गर्न थाले। विकासकर्ताहरूले को हात मा एक कम्प्याक्ट र फलदायी फलाम, नयाँ मोबाइल उपकरणहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो पायो। पहिले फोन स्मार्ट को एक किसिम को उद्भव गर्न नेतृत्व, र पछि ट्याब्लेट कम्प्युटर को खण्ड प्रभावित जो फोन, छोयो। पहिलो मोडेल देखा पर्न थाले, कम्पनी cautiously यो दिशा मा प्रयोग गरिरहेका सुरु, तर समयमा कुनै एक पहिलो ठूलो कदम र भारी लगानी गर्न चाहन्थे।
यो चरण एप्पल जो तुरुन्त पंथ उपकरण भए यसको आईप्याड, जारी, पछि गरेको छ। अन्य धेरै कम्पनीहरु पनि आफ्नो मोडेल प्रस्तुत गर्न थाले। अब मोडेल को कमी त्यहाँ प्रस्तुत किनभने, धेरै सजिलो चयन गर्न कुनै पनि ट्याब्लेट जवाफ। तथापि, एप्पल उत्पादनहरु - संकुचित उत्पादन, आफ्नो क्षमता भए तापनि तिनीहरूले मात्र एक निश्चित कवर केन्द्रित छ बजार को खण्ड। सबैलाई छैन आइओएस अपरेटिङ सिस्टम, सबै जस्तै स्क्रिन आकार र उपकरण को आयाम र, पाठ्यक्रम, सबैले मूल्य संग खुसी छ रुचि।
धेरै कम्पनीहरु आफ्नो ग्राहकहरु उत्पादन लाइनहरु को सिर्जना गर्न एक थप लचिलो दृष्टिकोण विकास गर्न थालेका छन्। मुख्य प्रतियोगिहरु बीचमा यो कम्पनी सैमसंग, एकदम सफलतापूर्वक एसस पनि पर्याप्त रोचक निर्णय, originality को devoid छैन प्रदान गर्दछ, एप्पल गरेको संग competes जो टिप्पण लायक छ। यी कम्पनीहरु यो कसैले ध्यान केन्द्रित गर्न सबै आवश्यक छैन भनेर बुझे छ, र आफ्नो बाटो जान छनौट, र त्यो सफलता नेतृत्व गरेको छ।
तर धेरै ग्राहकहरु लागत मा केवल उन्मुख भएको प्लेट कसरी चयन गर्न प्रश्न, जवाफ खोजिरहेका छन्। अक्सर, तिनीहरूले, बस किनभने केही सुविधाहरू यस्तो उपकरण किन्न त पैसा धेरै भुक्तानी गर्न चाहँदैनन् चाहन्छु। केही कम्पनीहरु, उदाहरणका लागि, Digma, अन्य बाटो लागे - तिनीहरूले सस्ती सिर्जना गर्न थाले, तर चाँडै लोकप्रिय बनेको कार्यात्मक उपकरण, गम्भीर आज बजार मा सेना को ब्यालेन्स परिवर्तन। यो थप ViewSonic र RoverPad समावेश गर्न सक्छ।
यद्यपि, वर्तमान अवस्था कार्य सुविधा छैन र ट्याब्लेट चयन गर्न कसरी को प्रश्नको जवाफ दिन मदत गर्दैन। सामान्यतया, मान्छे खरीद जस्तै बनाउन निर्णय गर्दा, तिनीहरू पहिले नै जसको लागि तिनीहरू ट्याब्लेट कम्प्युटर आवश्यक उद्देश्य थाह छ। केही अवस्थामा केवल एक असल, स्टाइलिश कुरा मा, त्यसपछि किन चिरपरिचित ब्रान्डहरु को मूल्य सोध्न छैन।
केही खरीदारों के को प्रश्न रुचि हो एक सस्ती ट्याब्लेट यो आधारभूत कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन् भनेर चयन गर्न। त्यसपछि हामी Digma कम्पनीको उत्पादन, एसस, ViewSonic हेर्न सक्छन्। यसलाई यन्त्र, यसको सीपीयू र अन्य प्राविधिक विशेषताहरु, विशेष अपरेटिङ सिस्टम मा, विशेष गरी, ट्याब्लेट खेल चयन गर्न के प्रश्नको जवाफ proizvoditelsnost ध्यान लायक छ। यस्तो उपकरण हुनु हुँदैन मात्र शक्तिशाली र कार्यात्मक हुन, तर पनि एक मंच, यो मामला मा, सञ्चालन प्रणाली व्यापक खेल, आफूलाई यो ध्यान दिन्छिन् सामान्यतया विकासकर्ता समर्थित हुनुपर्छ। गोली पीसी सजिलै यो एक शक्तिशाली पर्याप्त प्रोसेसर छ भने, एक खेल कन्सोल रूपमा कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, र सञ्चालन प्रणालीको लागि खेल धेरै सिर्जना गर्नेछ।
एसर Iconia B1: प्राविधिक विनिर्देशों र प्रयोगकर्ता समीक्षा
एक साइकल लागि नेभिगेटर कस्तो हुनुपर्छ?
ट्याब्लेट रूपमा माउस जडान गर्न: निर्देशन र सिफारिसहरू
बालुवा को एक अन्न को माइक्रो कम्प्यूटर आकार
गोली "मेगाफन लगइन 2": विशेषताहरु, फर्मवेयर
सेन्ट लूका को प्रतिमा। सेन्ट लूका क्रिमीआ: प्रार्थना, निको चमत्कार
अष्ट्रेलियाली बिरुवाहरु - मुख्य भूमि सौन्दर्य को Endemic देशहरूमा
Arbenina डायना: व्यक्तिगत जीवन, रचनात्मकता
स्तन कसरी वृद्धि गर्न? विकल्पहरू
संसारमा तेल निकासी। संसारमा तेल उत्पादन (तालिका हेर्नुहोस्)
के बाट हरियो ज्याकेट लगाउन? एक स्टाइलिश छवि बनाउन बाहिर उभिरहेका गर्न